सागर चन्द, कृष्ण लोथ्याल काठमाडौं, २३ साउन
सोमन राई र उनको संस्था (भ्वाइस अफ दि फिट्स) चर्चसँग आबद्ध छन् ।
भ्वाइस अफ दि फिट्स सञ्चालन हुने घरको नाम हो– द क्राउन अफ ब्युटी, म्याटरनिटी होम ।
यो नाम हिब्रु बाइबलबाट लिइएको हो । यहुदी सन्त आइजेयाको नाममा लेखिएको ‘आइजेयाको किताब’मा लेखिएको ‘यु विल बि अ क्राउन अफ ब्युटी इन द ह्यान्ड अफ लर्ड, अ किंग्स क्राउन इन द ह्यान्ड अफ योर गड’ बाट यो घरको नाम जुराइएको देखिन्छ ।
यो पुस्तक यहुदी क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो । राई आफैं पनि क्रिस्चियन हुन् त्यसैले संस्थाको सुरुवात पनि उनले क्रिस्चियन समुदायबाटै गरे ।
संस्था सुरु गर्नुको कारण उल्लेख गर्दै राईले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेका छन्, ‘वर्षाैं पहिले परमेश्वरले सत्र वर्षको एक युवकलाई बोलाउनुभयो । र, परमेश्वरको आज्ञा मान्दै त्यो युवक दक्षिण भारतमा आफ्नो धार्मिक अध्ययन गर्न जान्छ ।’
राईले सिक्किमको रानीपुल उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरे । बाल्यकालदेखि नै चर्चसँग जोडिएका राई आफूलाई फेरि एक दिन परमेश्वरले गर्भपतनबारे भनेको सुनाउँछन् ।
राई भन्छन्, ‘सन् २००९ मा मलाई प्रभुले नजन्मेका आवाजविहीनको आवाज बन्न प्रेरित गर्नुभयो ।’
त्यसपछि उनलाई ईश्वरको आवाजले छुन्छ । अनि, उनी गर्भपतनको विकल्पको खोजीमा लाग्छन् ।
गर्भपतनको विकल्प खोजिरहँदा उनलाई अचानक लाग्छ, ‘परमेश्वर आफ्ना मान्छेसँग कुरा गर्न इच्छुक थिए ।’
रहस्यमयी घर- ३ :
जन्मनेबित्तिकै बच्चा छोडेर कहाँ
जान्छन् आमा ?
राई भन्छन्, ‘यसमा (संस्था स्थापना) फेस गरिएको ठूलो च्यालेन्ज थियो, चर्चका मान्छेलाई यसबारे बुझाउनु । चर्चका मान्छेलाई यो बुझाउनु जरुरी थियो ।’
परमेश्वरको आग्रहमा उनले विभिन्न पास्टर तथा अगुवासँग कुराकानी गरे । यसपछि उनले संस्था सुरु गरे त्यसैले उनी आफूले गरिरहेको कामलाई परमेश्वरको सेवा भन्छन् ।
क्रिस्चियन समुदायलाई आफ्नो पक्षमा पार्न राईले सन् २०१० मा देशभरका विभिन्न चर्चमा ‘गर्भपतनको विरोधमा चर्चको मौनता तोडौं’ लेखिएको पर्चा पनि बाँडे ।
सन् २०१० मा राईले उपत्यकाका विभिन्न २० वटा चर्चमा गर्भपतनविरोधी कार्यक्रम चलाए । चर्चलाई बाँडिएको पर्चामा राई लेख्छन्, ‘नेपालका धेरै चर्चहरु गर्भपतन गराएका मान्छेले भरिएका छन् । तैपनि, नेपालका चर्चहरु गर्भपतनको विषयमा मौन छन् ।’
राईले गर्भपतनको विरोधमा चन्द्रागिरिको शालोम चर्च, कीर्तिपुरको क्रिस्चिय चर्च, मेथोडिस्ट चर्चलगायतका विभिन्न चर्चमा ‘प्रो–लाइफ’ भन्दै गर्भपतनविरोधी कार्यक्रम गर्ने र भिडियो देखाए ।
चर्चमा बाँडिएको पर्चामा राई आफ्नो संस्थाको उद्देश्य यस्तो लेख्छन्, ‘बाइबलका सिद्धान्तअनुसार जनचेतना जागृत गर्दै गर्भपतन कम गराउँदै अन्त्य गर्नु ।’
गर्भपतनबारे के भन्छ बाइबल
परमेश्वरका जनहरू मान्छेको भन्दा परमेश्वरका कानून मान्न बाध्य हुन्छन् । गर्भपतन वैधानिक हुँदैमा त्यो परमेश्वरको नजरमा ठीक हो भन्ने होइन (प्रेरित ५ः२९) ।
बाइबलका विभिन्न पदमा गर्भधारणमाथि परमेश्वरको नियन्त्रण हुने लेखिएको छ ।
छोराछोरी परमप्रभुले दिएको सम्पत्ति हुन् । र, गर्भको बच्चा आमाको होइन, परमेश्वरको हो भन्ने लेखिएको छ । गर्भभित्रको बच्चालाई परमेश्वरले नै निर्माण गर्छन् भन्ने कुरा पनि बाइबलमा लेखिएको छ ।
भ्वाइस अफ दि फिट्सको भवन एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘१०/४० कनेक्सन’को सहयोगमा निर्माण भएको हो । १०/४० कनेक्सन बाइबलअनुसार न्याय दिलाउने, चर्च स्थापना गर्ने, जोखिममा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने क्षेत्रमा काम गरेको दाबी गर्छ ।
यो संस्थाको वेबसाइटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समयसापेक्ष शिक्षण र रणनीतिक सहकार्य गर्ने कुरा पनि लेखिएको छ । आफ्नो बारेमा यो संस्था लेख्छ, ‘संसारभरका २ अर्ब मान्छेले जिससको बारेमा सुनेका छैनन् । त्यसकारण, हामी स्थापित भएका हौं ।’
अमेरिकाको यो मिसिनरी संस्थाले मध्यपूर्व, अफ्रिका र एसियाली देशमा क्रिस्चियानिटी फैलाउने काम गर्छ । यही संस्थासँग मिलेर राईको भ्वाइस अफ दि फिट्सले काठमाडौंका विभिन्न चर्चमा कार्यक्रम गरिसकेको छ ।
तर, कानूनअनुसार भ्वाइस अफ दि फिट्सले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन पाउँदैन । भ्वाइस अफ दि फिटसको विधानमा संस्थाले उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्ने कामहरुको सूचीमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको साझेदारी र सहभागितमा काम गर्नेछ ।’
विधानमा लेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भन्ने शब्द काटिएको छ । यसको अर्थ हो, यो संस्थाले विदेशी सहयोग लिन पाउँदैन ।
यो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन पाउँदैन भन्ने कुरा समाज कल्याण परिषद्ले पनि पुष्टि गर्‍याे ।
समाज कल्याण परिषदमा यो संस्था विदेशी सहयोग लिने संस्थाहरुको सूचीमा छैन । राईले भ्वाइस अफ दि फिटसको भवन निर्माण गर्दा १०/४० कनेक्सनसहित प्रोक्लेम लाइफ ग्लोबल नामक अमेरिकी संस्थाको पनि सहयोग लिएका थिए ।
प्रोक्लेम संस्थाले पनि गर्भपतनको विरोधमा काम गर्छ । यो संस्थाले गर्भपतनको विरोधमा उभिएर ‘परमेश्वरका मान्छेलाई अनुशासित बनाउने’ काम गर्छ ।
नेपालमा विदेशी सहयोग लिन समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, यो संस्थाले कुनै प्रकारको स्वीकृति नलिएको समाज कल्याण परिषद् बताउँछ ।
१०/४० कनेक्सनकी सहसंस्थापक हुन् लेस्ली सेग्राभेस । सेग्राभेसले विकास गरेको ‘भ्वाइस फर दि भ्वाइसलेस’ भन्ने पाठ्यक्रम पनि सिकाउँछ भ्वाइस अफ दि फिट्सले ।
परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने र परमेश्वरप्रति बफादार रहन सिकाउने यो पाठ्यक्रमअनुसार संस्थामा आउने गर्भवतीलाई क्रिस्चियन धर्म अनुशरण गर्न लगाइन्छ ।
त्यसो त यो संस्थाले सन् २०१० मा ‘परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्’ भन्दै गर्भपतनको विकल्प खोजौं भन्ने नारासहित काठमाडौं उपत्यकाका चर्चलाई शान्ति पदयात्रामा सहभागी गराएको थियो ।
गर्भवती भएर यहाँ आउनेलाई यो संस्थाले जिससलाई आफ्नो उद्धारकर्ताका रूपमा मान्न लगाउँछ । र, गर्भमा रहेको बच्चालाई प्रभुको प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्न लगाइन्छ ।
‘सकारात्मक विचार राख्नु र वरदानअनुसार काम गर्नू’ यो संस्थाको मूल्यमान्यता हो । सकारात्मक विचार त तपाईंले बुझ्नुभयो होला । तर, वरदान ?
बाइबलले बच्चालाई परमेश्वरको वरदान भन्छ ।
संस्थाको मूल्यमान्यताकै अर्को बुँदामा लेखिएको छ, ‘परमेश्वरप्रति उत्तरदायी हुनु ।’ अर्थात्, यो संस्था परमेश्वरप्रति उत्तरदायी हुनेछ । र, यहाँ आउने गर्भवतीलाई पनि परमेश्वरप्रति उत्तरदायी बनाइनेछ त्यसैले त यहाँ आएर बच्चा जन्माएर जाने युवती तथा महिलाको बिदाइ गर्दा ठूलो क्रस चिन्हलाई साक्षी राखिन्छ ।
क्रिस्चियन परम्पराअनुसार टाउकोमा क्राउन पहिर्याइन्छ । अबदेखि गल्ती नगर्ने वाचा गर्न लगाइन्छ ।
(रहस्य अझै सकिएको छैन, थप सामग्रीको प्रतीक्षा गर्नुहोस् ।)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६, ०३:४६:००